Ukukhupha i-Induction Brazing Izixhobo zensimbi ezingenanto ezingenayo i-Heater
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Ukuchithwa kwezixhobo zeBrazil ezingenasici
I-Induction Brazing Izixhobo zensimbi ezingenasici
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: bhonce insimbi engenasici, ukuvutha kwentsimbi engenanto, ibhanti ephezulu, ukutyunjwa kwebhanki yentsimbi engenasici, I-RF ibhonce insimbi engenasici, i-brazing steel brain, Ukufudumeza insimbi engenasici
Ukukhangela i-Brazing Brazing Izixhobo zensimbi ezingenasici enezixhobo zoHulelo lwe-RF
Ukuqhawula amaqela amathathu kwiintlanganiso zamazinyo zepayiti ye-jet ne-heatproduction; ukuphucula ukuvelisa isivuno kunye nokunciphisa ixesha lokujikeleza.
Inxalenye kunye neMathiriyeli Inkcazo
Ingqungquthela yentsimbi engenasici yokuphunga iipumphu, iibhubhu ezimbini, i-tube collar support, i-brace rings alloy, i-B1 flux
I-DW-UHF-4.5kW RF Induction Power Heating Power Supply, i-inductor eyenziwe ngokukhethekileyo (coil)
U ku sebenza rhoqo
Ukuvavanywa kokuqala kwenzelwe ukuseka amaxesha okushisa nokushisa. Kwakuzimisele ukuba inkqubo yesibini iza kubonelela ngeziphumo eziphambili. Kulolu hlelo lokusebenza i-turn-four-in turntor eyenziwe ngokukodwa, yayisetyenziselwa ukuhambisa nobushushu kwiindawo ezidibeneyo. Iibhubhu ezimbini, i-tube collar support kunye neengxuma zempumlo zazihlanganisiwe kwaye zigcinwe kwindawo yokuthunyelwa kwexeshana. Amakhonkco e-braze alloy afakwe kwindawo kwaye isambatho esincinci se-B1 flux yayisetyenziswa kuyo yonke ibandla. Kwisigaba sokuqala senkqubo yokufudumala, ukuphela kwepayipi yomgangatho wendibano yafakwa kwindawo yokufudumala kunye namandla okutyalwa awanikezelwa ngemizuzwana ye-10. Kwinqanaba lembini, ibandla liye laguqulwa kwaye isiphelo esingaphansi kwendibano sasivutha ngenxa yemizuzwana eyongezelelweyo ye-10. Ibandla lalisuswa, lihlamba ngamanzi ashushu ukususa ukuphazamiseka, kunye nefuthe elomileyo ngomoya oshisayo.
Iziphumo ezihambelanayo, eziphindaphindiweyo zifunyenwe kunye ne-DW-UHF-4.5kW amandla kunye ne-10 yesijikelezo sesibini. Umtya ngamnye webhondi wavalwa kunye nefayile
Ukukhupha i-Brazing Brazing Intainless Wire To Brass
Izixhobo zokuBhabisa iiFree Frequency
I-Induction Brazing Tube yeCopper
I-Induction Brazing Shaft